खाने होइन त जागिर ? लुम्बिनी विकास बैंकले माग्यो विभिन्न पोस्टको लागि कर्मचारी
ARCHIVE, JOB » खाने होइन त जागिर ? लुम्बिनी विकास बैंकले माग्यो विभिन्न पोस्टको लागि कर्मचारी
काठमाडौँ - लुम्बिनी विकास बैंकमा जागिर खुलेको छ । बैंकले एक जना प्रोजेक्ट फाइनान्स मेनेजर तथा केही संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्रान्च मेनेजर मागेको छ । प्रोजेक्ट फाइनान्स मेनेजरका लागि दुई वर्ष, सीएका लागि एक वर्ष र ब्रान्च मेनेजरका लागि चार वर्षको कार्यअनुभव मागिएको छ ।
शैक्षिक योग्यता प्रोजेक्ट फाइनान्स मेनेजरका लागि स्नातकोत्तर र ब्रान्च मेनेजरका लागि स्नातक उतीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । प्राजेक्ट फाइनान्स मेनेजरका लागि सीएले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । उम्मेदवारको उमेर हद पनि तोकिएको छ । सीए र ब्रान्च मेननेजरमा ३५ वर्ष र प्रोजेन्ट फाइनान्स मेनेजरमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।
आवेदन दिने म्याद जेठ ९ गतेसम्म रहेको छ । आवेदन इमेलमार्फत दिनुपर्नेछ ।